« Dimy minitran’ny «stade»…. » | NewsMada
« Dimy minitran’ny «stade»…. »
Madiva hifarana ny lalao “Mondial”. Raha raisina amin’ny lalao baolina kitra ny fitantanana ny firenena, fitenin’ireo mpankafy azy ny mandika ilay dimy minitra farany iny amin’ny hoe “dimy minitran’ny Stade,….”, ekipa tamin’ny taona 70, tao anatin’io fotoana io vao tena nilalao mafy. Toy ilay fiteny malagasy hoe “afom-bilany kely”, hatramin’izay tsy hita izay natao fa rehefa aty am-parany vao manovokovoka.
Toa azo raisina amin’izany ity zava-misy eto amintsika ity. Ekena tokoa fa anisan’ny nahazo sitraka tamin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mahazatra i Madagasikara amin’ny fitantanana ny toekarena ankapobeny. Mirarakompana ny famatsiam-bola (aoka tsy hohadinoina fa vola trosaina).
Saingy mahavariana ity fananganana rafitra samihafa ao anatin’izao fiafaran’ny fe-potoam-piasan’ny filoha mialoha ny hidirana amin’ny fifidianana izao. Lazaina fa mila atsangana iray volana aorian’ny fanaovana fianianana ny Fitsarana manokana mitsara ny mpitondra (Haute cour de justice). Nefa am-bolana vitsy mialoha ny fiafaran’ny fe-potoam-piasany vao tanteraka. Efa tamin’ny taona 2016 ny nivoahan’ny lalàna manangana ny fitsarana manokana ny andramena, saingy omaly vao nandray ny toerany ireo mpitsara mpikambana ao anatiny.
Santionany ihany ireo fa maro ny lafin-javatra azo tanisaina, raha tsy hiteny afa-tsy ny fitakian’ny mpanohitra hanovana ny governemanta, ary nekena ihany taty aoriana, raha tsy natao nandritra ny efa-taona nitondrana. Nekeny ny ampahan’ny fitakian’ny mpampianatra amin’ny tombontsoany, raha tsy nohenoina mihitsy nandritra ny taona maro. Neken’ny HCC ny fitakian’ny depiote mpanohitra tsy hankatoa ilay lalàm-pifidianana nolanina maika teny amin’ny aAntenimiera, sns.
Hifarana amin’ny alahady ho avy izao ny “Mondial” fa mitohy kosa ny antsika ary ho maro ny tranga fonosin’ny dimy minitra farany tsy hifaranan’ny lalao.